म अनि उनी (लघुकथा) – Chitwan Post
म अनि उनी (लघुकथा)
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ११, २०७६
धेरै दिनपछि फेसबुकमा बसेको थिएँ । एउटा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट ‘अनु भट्टराई’ । प्रोफाइल चेक गरेँ,। अनुहार लुकाइएको थियो । म्युचुअल फ्रेन्ड्समा कोही छैनन् । म सोचमा परेँ । एक्सेप्ट गरौँ या नगरौं ? केटीको नाममा आएको रिक्वेस्ट । मेरो लेख तथा रचनामा एउटा भए पनि लाइक बढ्न सक्छ भन्ने झिनो आशाले त्यो रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट गरेँ ।
केही समयपछि म्यासेन्जरमा म्यासेज आयो– ‘थ्याङ्क्स फर एक्सेप्ट मी !’
मैले पनि सटीक रिप्लाई दिएँ– ‘वेलकम !’
समय बित्दै गए । उनी फ्रेन्ड लिस्टमा विशेष हुन थालिन् । बिस्तारै च्याटमा गफ हुँदै जान थाल्यो । नम्र अनि सभ्य भाषाको प्रयोग गर्थिन् उनी । ‘म एउटा विवाहित पुरूष हुँ’ यो कुरा मैले पहिल्यै उनलाई जानकारी गराइसकेको थिएँ । ‘मलाई ‘तपाईं’ होइन ’तिमी’ भन्नुस् न है, मलाई राम्रो लाग्छ’ उनले यसो भनेपछि मैले उनलाई ‘तिमी’ नै भनेर सम्बोधन गर्न थालेको थिएँ ।
‘हजुरले श्रीमतीलाई कति माया गर्नुहुन्छ ?’– अप्रत्याशित प्रश्न गरिन् उनले ।
‘जति मदनले मुनालाई गर्थे, सायद् त्योभन्दा पनि धेरै’– मैले यही जवाफ दिएँ ।
‘मभन्दा पनि धेरै ?’– मुख बंग्याएको स्टिकरसहित उनले फेरि प्रश्न गरिन् ।
‘उम् ! तिमी त एउटा अदृश्य हावाझैँ लाग्छ, मैले त आजसम्म तिम्रो अनुहार लुकाइएको प्रोफाइल पिक्चर मात्र त देखेको छु’– एउटा चस्मा लगाएको स्टिकरसहित रिप्लाई दिएँ ।
‘गा‍ह्रो छ । म पनि कसैकी श्रीमती हुँ, अहिलेलाई हजुरको लेख तथा रचनाहरुलाई लाइक मात्र दिन सक्छु । बाँकी कुरा भगवान्मा निर्भर छ, उनकै निर्देशनमा भर पर्छ’– यति लेखेर उनी अफलाइन भइन् ।
केही दिनपछि उनलाई अनलाइन देखेँ, अनि सोधेँ ।
‘आरामै छ्यौ ?’
उनले म्यासेन्जरबाट अडियो कल गर्दै भनिन्– ‘म एकदम ठीक छु, अनि हजुर ? अहिले कता के गर्दै हुनुहुन्छ ?’– उनले प्रश्नैप्रश्नको झटारो हानिन् ।
‘म अफिसमा छु, अनि तिमी ?’– मैले सोधेँ ।
उनले भनिन्– ‘पर्सा, चौबीस कोठी । अनि हजुरको अफिस कहाँनेर छ ? म हजुरलाई भेट्न त्यहीँ आउँछु ।’
मेरो अफिस त नारायणगढ लायन्सचोकनेर हो । बरू, एउटा काम गर न । तिम्रो सेलफोन नम्बर देऊ त ! म मेरी श्रीमतीलाई रिसिभ गर्न त्यहीँ पठाइदिन्छु । कि तिमीलाई म मेरी श्रीमतीको नम्बर दिऊँ ? चौबीसकोठी चोकनजिकै हो मेरो घर पनि, तिमी त्यहीँ गएर बस’– मैले भनेँ ।
‘हजुरलाई भेट्न भनी म कहाँदेखि आएँ । होटलमा रूम पनि लिएको छु । बरू, हजुर छिट्टै आउनुस् न’– उनले भनिन् ।
‘अनु, तिमी त्यहाँ आएर होटल किन बस्नुप‍¥यो ? मैले हाम्रो फ्रेन्डसिपको बारेमा सबै कुरा मेरी श्रीमतीलाई शेयर गरिसकेको छु । फेरि त्यस्तो अड् फिल किन ?’– मैले उनलाई आग्रह गरेँ ।
‘हजुरले मेरो कुरै बुझ्नुभएन ।’
‘मैले सबै कुरा बुझेको छु, बरू तिम्रो नम्बर देऊ न मलाई छिट्टो’– मैले उनलाई अत्याउँदै भनेँ ।
‘छिः कस्तो होला ? कुरै नबुझ्ने’ यति भन्दै उनी अफलाइन भइन् । पटकपटक चेक गरिरहेँ, तर उनी अनलाइन बसिनन् ।
साँझ पर्न थालिसकेको थियो । म अफिसको काम सकेर आफ्नो घर पर्सा, चौबीसकोठीतिर लागेँ । घर पुग्दा मलाई अति मन पर्ने परिकार पाकिराखेको रहेछ । मैले उनको अनुहारतिर हेर्दै मन्द मुस्कान दिएँ । अनि उनी पनि मलाई हेर्दै मुसुक्क मुस्कुराइन् ।
बिचरी ! आजसम्म पनि उनी यो कुरामा एकदमै अनभिज्ञ छिन् कि ‘अनु भट्टराई’ नाम राखेर उनले नयाँ फेसबूक अकाउन्ट बनाएको कुरा मलाई पनि थाहा छ ।
मेरो गैँडाकोट (कविता)
‘टाप्रेघारी’भित्र झ्याङ्गिएको देशप्रेम (पुस्तक समीक्षा)